कमेडि च्याम्पियन सिजन २ : छ हजार मध्यबाट उत्कृष्ट २४ छानिए, को को परे उत्कृष्ट २४ मा ? | Nepal Ghatana
कमेडि च्याम्पियन सिजन २ : छ हजार मध्यबाट उत्कृष्ट २४ छानिए, को को परे उत्कृष्ट २४ मा ?
देश तथा बिदेशबाट कमेडि च्याम्पियन सिजन २ को लागी खुल्ला गरिएको डिजिटल अडिसनमा ६ हजार बढिले सहभागिता जनाएका थिए । कोभिड महामारी बिच डिजिटल अडिसनबाट १८० जना फिजिकल अडिसनका लागी छानिएका थिए ।
छानिएका १८० जनाबाट थप छनौट हुँदै अन्तिम २४ प्रतिस्पर्धीहरु छानिएका छन ।
गत सिजन झै यस सिजनमा पनि गत बर्षकै निर्णायकहरु सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदिप भट्टराई र ऋचा शर्मा यथावत रहेका छन ।
यस वर्षको कमेडि शो फेब्रुअरि ६ (माघ २४, शनिबार) बाट टेलिभिजनमा प्रसारण गरिने उक्त शोका निर्देशक विशाल भण्डारिले बताए ।
स्याङ्जा निवासी बिकासले विभिन्न कमेडि भिडियोहरुमा अभिनय गरिसकेका छन ।
छनिएका उत्कृष्ट २४ प्रतियोगीहरु मध्यबाट निर्णायक तथा आयोजकले उत्कृष्ट १५ छनोट गर्दै शोलाई अगाडि लानेछन । कमेडि च्याम्पियन सिजन २ को टप २४ मा पर्न सफल सम्पुर्ण प्रतियोगिहरुलाई नेपाल घटनाको तर्फबाट अग्रीम शुभकामना ।